रोजगार – ZoomNP
कति छ आज आइतबार डलर, दिर्हाम, रियल, रिंगेट लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर?
Exchange Rate for 22 January, 2017
नेपाल वायुसेवा निगममा खुल्यो ठुलो संख्यामा रोजगारी (पुरा विवरण)
वायुसेवा निगमले माग्यो सिनियरदेखि जुनियर क्याप्टेनसम्म,५० प्राविधिकलार्इ पनि अवसर
काठमाडौं : महँगो पैसा तिरेर पाइलट पढेकालार्इ खुसीको खबर छ। नेपाल वायुसेवा निगमले २३ जना पाइलटलार्इ जागिर दिँदैछ। निगमले २३ पाइलटसँगै ५० जना प्राविधिक कर्मचारी समेत राख्नेछ।
निगमले १८ महिनामा थप्न लागेको नयाँ जहाज र सञ्चालनमा रहेका जहाजका लागि पाइलट आवश्यक भएपछि विज्ञापन खुलाएको छ। निगमले सिनियर क्याप्टेन ९, क्याप्टेन ७ र जुनियर क्याप्टेन ७ जना मागेको छ।
महँगो रकम तिरेर पाइलट कोर्स गरे पनि काम नपाएर धेरै पाइलट बेरोजगार छन्। मुलुकभित्र...
नेपाल बायुसेवा निगमले विदेशी पाइलटलार्इ १६ लाख तलब, नेपालीलार्इ २ लाख !
असोज १३ राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल बायुसेवा निगमका साना जहाज उडाउने पाइलटले महिनामा मुश्किलले २ लाख रूपैयाँसम्म पारिश्रमिक हात पार्छन्। निजी वायुसेवाका पाइलटले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी पाउँछन्।
वर्षदिनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको चिनीयाँ जहाज कमान्ड गर्न आएका न्यूजिल्याण्डका...
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा जागिर खुल्यो, १२ कक्षा पास गरेकालाई अवसर
काठमाडौं, २८ भदौ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा विभिन्नपदमा २४९ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
विभिन्न पदमा प्लस टु देखि मास्टर्स उत्तिर्ण सम्मले दरखास्त दिन पाउने छन् ।
योग्यता पुगेका तथा इच्छुक व्यक्तिले असोज २८ गते सम्म रामशाहपथमा रहेको बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा दरखास्त बुझाउन पर्नेछ ।
दोब्बर दस्तुर तिरी थप ७ दिन भित्र आवेदन फारम बुझाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
बैंकको वेवसाइड www.rbb.com.np मा गएर क्यारियन नोटिस बाट आवेदन फारम डाउनलोड गरेर भर्नुपर्ने र बैंकमा नै गएर बुझाउन पर्नेछ ।
दलाललाई ३५ लाख बुझाएर अमेरिका उडेका नेपालीको रुवाबासी
२७ भदौ– अमेरिका जान भनेर काठमाण्डु हुँदै दिल्लीबाट भेनेजुयलाको भिसा हानेर पठायो, भेनेजुयलाबाट मेक्सिको जाने क्रममा त्यहाँको एयरपोर्टमा हामीलाई समातेर शरणार्थी शिविर पठाए, बल्लतल्ल छुट्यौं, केहीलाई दलालको कोठामा थुनेर राखेको छ, हामीलाई बचाउनु पर्योा,’ ग्वाटेमालाबाट टेलिफोनमा पीडा पोख्दै थिए कृष्ण न्यौपाने ।
आले थरका दलाललाई प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँ बुझाइ अमेरिकी सपना बुनेर हिँडेका ४० जना आफूजस्तै नेपाली युवक अहिले भेनेजुयलामा अलपत्र परेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
भेनेजुयलाबाट ग्वाटेमाला हुँदै अमेरिका पु¥याउने आश्वासनसहित दलालले...
नेपालीहरुको लागि खुसीको खबरः कोरिया र इजरायल जानेका लागि नयाँ प्रस्ताव !
काठमाण्डु, २४ भदौ- दुई देशका सरकारबीचको सम्झौताको आधार रोजगारीका लागि जाने कामदारको हकमा पनि निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले गरेको छ ।
बैठकमा ६ महादेशबाट दुई देशका दरले...
अब मलेसिया र खाडी मुलुकमा जान नदिने ! रोकियो श्रम स्वीकृति
काठमाडौं, २१ भदौ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसिया र खाडी मुलुकलगायतमा सुरक्षा गार्डका रुपमा जाने नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति रोक्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयालाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले म्यानपावर एजेन्सीले सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको भन्दै तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेको हो । कारोबार दैनिकले समाचार छापेको छ ।
समितिका सभापति प्रभु शाहले सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारलाई बढी ठगी गरेको गुनासो...